အိန္ဒိယမင်္ဂလာဆောင်အခမ်းအနားတွင်အမြဲတမ်းဖြစ်ပျက်နေသောအဆင်မပြေမှုများ - သတင်း
မင်္ဂလာဆောင်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ပျော်ရွှင်မှုနှင့်ရွှင်လန်းမှုတစ်သက်တာအတွက်အတူတကွစုဝေးနေကြသောလူနှစ်ယောက်၏လှပသောအခမ်းအနားဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယမင်္ဂလာဆောင်သို့သော်? အခြားပုံပြင်တစ်ခု။
ငါလက်ခံရရှိသည့်အခါတိုင်း kankroti ပို့စ်တွင် (မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်ကြား) ငါကြောက်လန့်ချက်ချင်းခံစားချက်နှင့်ပြည့်စုံပါ၏။ အိန္ဒိယမင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာပျော်စရာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံမရှိတာဘာကြောင့်လဲ။ အထူးသဖြင့်မင်းတို့သူတို့ကိုမင်းရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးသွားခဲ့ပြီ။
အင်ဒီးယန်းကောဘယ်လိုလဲ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သာမန်လူများကဲ့သို့နှုတ်ခွန်းဆက်စကားကိုအဘယ်ကြောင့်မပြောနိုင်သနည်း။ အဲဒီမှာအဆင်မပြေ Two-side ပွေ့ဖက်, ဒါမှမဟုတ်ငါတို့ပင်သော weirder လက်လှုပ် / ကိုင်အရာ - ငါတောင်မှစကားဖြင့်ရှင်းပြလို့မရပါဘူး, သောကြောင့်ဘယ်လောက်ရယ်စရာပါပဲ။
နေရာနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏မိဘများကတစ်စုံတစ်ရာမှတ်ချက်ပေးသည်
ဆိုက်ရောက်သည့်အခါ - Hare Krishna ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းမဟုတ်ပါလား။ ကောင်းပြီအမေ, သင်ငရဲဘယ်မှာလက်ထပ်ခဲ့တာလဲ သို့သော် အကယ်၍ Hare Krishna ဟတ်တွင်ရှိလျှင် ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းကကားမောင်းခြင်းသည်မည်မျှဝေးကြောင်းတိုင်တန်းလိမ့်မည်။
Wow, the ကိုလည်းမျှော်လင့်ထားပါ mandap ဘာကြောင့်ဒီလောက်ပိုက်ဆံတွေဖြုန်းတီးခဲ့တာလဲ mandap ? အိန္ဒိယမိသားစုများနှင့်သင်အနိုင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
သတို့သား၊ သတို့သား၊ panditji - လူတိုင်း နောက်ကျနေပြီ တကယ်တော့ငါသူတို့ IST (အိန္ဒိယစံတော်ချိန်) တွင် run တော်တော်လေးသေချာပါတယ်။
အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲမယ်ဆိုတာ Madeleine ယခုဖြစ် mccann
ဒါဟာရိုးရိုးသားသားပြောရရင်မင်းကြားရသမျှထဲမှာအဆိုးဝါးဆုံးသောအသံပဲ။ အမြဲတမ်း Choir တွေဟာငါတို့အတွက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အယူအဆတစ်ခုဖြစ်တယ်။
အဆိုပါ dhol ကစားသမားရောက်လာနှင့်အမှုအရာခေတ္တတက်ကြည့်ဖို့စတင်ပါ
Ooooooo မင်္ဂလာဆောင် Vibe ။ ဤအရာသည်ဖြစ်ပျက်လာမည့်တစ်ခုတည်းသောအနည်းငယ်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောအရာဖြစ်သည်။ ဒါဟာနောက်တဖန်ကဒီမှာကနေဆင်းအားလုံးပါပဲ။
နောက်ဆုံးတော့သတို့သမီးရောက်လာပြီးလမ်းကိုလျှောက်သွားတယ် Agar tum mil jao
သို့မဟုတ်အချို့ရယ်စရာရယ်စရာချိစ်ဟိန္ဒူရုပ်ရှင်သီချင်း overplayed ။ နှင့်အခြားအိန္ဒိယမိန်းကလေးထင်၏ ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်မင်္ဂလာဆောင်၌ဤကဲ့သို့သောသီချင်းရှိလိမ့်မည်မဟုတ်။
မင်းပတ်ပတ်လည်ကိုကြည့်ပြီး Sari တိုင်းကိုစီရင်တယ်
အလေးအနက်ထားသော်လည်း, အဘယ်ကြောင့် Simran Masi ရဲ့သမီးတစ် ဦး Sari အင်္ကျီအဖြစ် Boohoo halter ထိပ်တန်းဝတ်ထားသလဲ?!
အိန္ဒိယဝတ်စားဆင်ယင်မှုတွင်အိန္ဒိယမဟုတ်သော to ည့်သည်သည်ထင်ရှားသည်
Vah vah ။
uni မှကျနော့်သူငယ်ချင်း Tash က MY မင်္ဂလာဆောင်သို့အ ၀ တ်ကို ၀ တ်ဆင်ရမည်။ သူမသည်ကြီးမြတ်ကြည့်ရှုပါလိမ့်မယ်။
လက်ထပ်ပွဲအခမ်းအနားကို (၂) နာရီ (သို့မဟုတ်ကြာကြာ) ကြာသည်
အဆိုပါ '' အေးမြ '' ယဇ်ပုရောဟိတ်နှစ်ခုစက္ကန့်အားလုံးအတွက်အေးမြသည်
အေးမြခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အင်္ဂလိပ်စကားပြောခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ဒါကမကြာသေးမီကဟိန္ဒူမင်္ဂလာဆောင်များမှာ၊ သူတို့ကအင်္ဂလိပ်လိုအရာအားလုံးကိုရှင်းပြတဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးရပြီးကလေးတွေနဲ့အတူနေတယ်။
တစ်စုံတစ် ဦး ကတကယ်မကောင်းတဲ့အကကိုဖျော်ဖြေပါတယ်
မင်းကပြုံးတယ်၊ လက်ခုပ်တီးတယ်၊ တစ်စုံတစ်ယောက်သည်ခြောက်နှစ်အရွယ်ဘောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးအားအလိုမလိုက်ရန်ဘောလုံးများသာစားခဲ့မည်ဆိုလျှင်သင်စားနိုင်လိမ့်မည်ဟုတွေးနေသည်။
ဒါဟာများသောအားဖြင့်အတော်လေးပျော်စရာပါပဲ။ ဒီအစ်ကိုကမိန်းမတစ်ယောက်လိုဝတ်စားဆင်ယင်မယ်၊ ဒါကရယ်စရာကောင်းတယ်၊
သို့တိုင် samosas ၏ပန်းကန်သည်မဟုတ်လော
မိသားစုအားလုံးသည်သတို့သမီးနှင့်သတို့သားတစ် ဦး ချင်းစီ၏မိသားစုပုံတူများကိုယူရန်လိုအပ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ဤပုံများသည်သူတို့အတွက်တကယ်အရေးကြီးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါကကြောက်စရာကောင်းတဲ့မုသားပဲ။ ဘယ်သူမှဒီပုံတွေကိုနောက်တဖန်ဘယ်တော့မှပြန်ကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာငါတို့သိတယ်။ သင်ရုံနေ့လည်စာယောက်ျားတွေနှောင့်နှေးပါတယ်။
ပို၍ ဆိုးသည်မှာတစ်ခါတစ်ရံတွင်မိသားစုအမည်များသည် DJ ၏မိုက်ကရိုဖုန်းပေါ်သို့ထွက်လာခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အစဉ်အမြဲအရှက်ရဖွယ်ရာဖြစ်နိုင်သည်။
နေ့လည်စာစား နောက်ဆုံးတော့ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်
At ။ မင်္ဂလာပါ။ နောက်ဆုံး။ နောက်ဆုံးတော့မင်းအစာစားပြီးခဏစောင့်ပါ ဦး ။
ကြောင်းအလုံအလောက်မကောင်းတဲ့မပါလျှင်, သူတို့သည်သင်၏ပုံမှန်အားဖြင့်အိန္ဒိယပါတီအဖြူရောင်ပလပ်စတစ်ပြားသို့အစားအစာ slop အဖြစ်, သင်ခေတ္တ (နှင့်အဆင်မပြေ) သင့်ရဲ့တိုးချဲ့မိသားစုရှိအထီးအသိအမှတျပွု။ ဆန်သည်သင်၏ဟင်းကိုမလိုအပ်သောကြောင့်အဆင်ပြေသည့်အပိုင်းများအားလုံးပါ ၀ င်သည်။ ပါရမီရှင်။
သင်လက်ထပ်သည့်အခါအိန္ဒိယအမျိုးသမီးဟောင်းတစ် ဦး ကမေးသည်
ဒီမင်္ဂလာဆောင်ပွဲတွေအားလုံးမှာဖြစ်ပျက်နေတာသေချာပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်အိန္ဒိယမှာတော့ဒီလိုမျိုးဘာမှမရှိဘူး။ တောင်းခံရပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး များသောအားဖြင့်တနည်းသူတို့တတိယသူတို့က 16 Back သို့ချွတ်, အဘွားများသောအားဖြင့်လက်ထပ်အသက်အရွယ်၏မဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖြစ်နိုင်သည်။
နာရီ ၁၈ သန်းအခမ်းအနားအပြီးတွင်သူတို့သည်ထူးဆန်းသောဂိမ်းများကိုကစားကြသည်
မည်သူမဆိုအနိုင်ရရှိသူသည်ပုံပေါ်ရှိဘောင်းဘီကိုဝတ်ဆင်လိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်အလေးအနက်ထားကျနော်တို့ဘယ်တော့မှထွက်ခွာနိုင် ????? Samosas ကိုအိမ်ပြန်ယူလို့ရမလား။
လူတိုင်းငိုကြတယ်။ သင်မကျင့်ဘူး မင်းနောက်ဆုံးတော့ထွက်သွားလို့ပဲ။